Maungtintyin: ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဂေဟဗေဒ
ဗုဒ္ဓ၀ါဒီများအတွက် ဓမ္မဟာ အလေးအမြတ်ထားအပ်တဲ့ဥပဒေ- အကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဒေသနာတော်များ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝအရာဝတ္ထုအားလုံးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကြောင်များ- ခွေးများ- ပင်ဂွင်ငှက်များ- သစ်ပင်များ- လူသားများ- ခြင်များ- နေရောင်များ- သစ်ရွက်များ- နှင်းပေါက်နှင်းစက်များ ဒီအရာအားလုံးဟာ ဓမ္မဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တကယ့်ဒီအနှစ်သာရပိုင်းမှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ ဘာသာတရားတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ဘာသာတရားဆိုင်ရာ ဂေဟဗေဒတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
သက်ရှိအားလုံးအတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ- သနားခြင်းကရုဏာ- ရိုသေးလေးစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်တဲ့ အခြေခံ သဘောတရားများဟာ အနောက်တိုင်းစိတ်သဘောနှင့် အကျွမ်းဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် များမကြာမီရာစုနှစ်များမှာ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အဲဒါတွေကို လူသားများအတွက်သာလျင် ကန့်သတ်ထားပြီးပါပြီ။ စကြ၀ဠာဆိုင်ရာနှင့် ရှောင်လွှဲမရနိုင်တဲ့ အစွမ်းပါဝါမပါဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွေးများမှာ အဲဒါကို ခွင့်ပြုသော်လည်း အကြောင်းအကျိုး ကံရဲ့ဥပဒေမှာတောင် အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတွေးများ၌ အခန်းကဏ္ဍအချို့ ရှိပါတယ်။
မူလအစအားဖြင့် ကံရဲ့ဥပဒေဟာ ပထမဆုံးအကြောင်းတရားအဖြစ် စိတ်ကို နေရာချထားပေးပါတယ်။ ဒါဟာ အကျွန်ုပ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာနဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကံတရားရဲ့ ပြုလုပ်သူနှင့် ပုံဖော်သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မွေးဖွားခြင်းနဲ့ ဘ၀ဖြစ်တည်မှုဟာ- ကမ္ဘာလောကနှင့်အကျွန်ုပ်တို့ကို ခွဲခြားမရနိုင်အောင် ဆက်သွယ်ထားတဲ့….. ပြီးတော့ တစ်စုံတစ်ရာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရတဲ့ ဘ၀ဖြစ်တည်မှုကို အကျွန်ုပ်တို့အပေါ် ငြင်းပယ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့…. အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အပြင်ဘက်အကြောင်းတရားအပေါ်မှာ အားထားမှီခိုနေရပါတယ်။ အမှန်စင်စစ် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ နက်နက်နဲနဲလုံလုံလောက်လောက် တွေးခေါ်တဲ့အခါ အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်နှင့် ကမ္ဘာလောကကြားရှိ နယ်နိမိတ်များဟာ ရေမှာ ဗုံးပေါလအောဖောဖောသီသီ စီးမျောပါသွားပါတော့တယ်။
အကျွန်ုပ်တို့နှင့်သဘာဝအားလုံးဟာ ခွဲထုတ်မရပါ။ ဘ၀ချင်းယှက်နွှယ်နေပါတယ်။ တစ်ခုတည်းဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့နှင့် အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကရုဏာဟာ ပင်ကိုယ်အလိုအလျောက် ဖြစ်သင့်သလို အခြားသူများအတွက် ကရုဏာဟာ သဘာဝတစ်ခု ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ တကယ့်ရင်သပ်ရှုမောလောက်ပြီး ခက်ခဲတဲ့အတွေးအခေါ် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါဟာ တစ်ဦးချင်းအတ္တကို အမှီအခိုကင်းခြင်းမရှိ, တသီးတခြားဖြစ်ခြင်းမရှိဆိုတဲ့ တကယ့်မှားယွင်းစွာ နားလည်ထားမှုတစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ဦးချင်းအလိုက် အတ္တဟာ အနောက်ကမ္ဘာ့ရဲ့ တကယ့်ချစ်ခင်မြတ်နိုးစွာ ရင်ဝယ်ပိုက်ထားတဲ့ ယုံကြည်မှုများဆိုင်ရာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါဟာ ဆင်းရဲဒုက္ခများရဲ့ အကြီးမားဆုံး ရင်းမြစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ အကျွန်ုပ်တို့ကို ကမ္ဘာမှ ခွဲခြားထားတဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေနစ်ရာဝါးကူထိုးပေးခြင်းဖြင့် အဲဒါကို တွယ်ဖက်ထားဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ကို ဖြစ်စေတဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ညဏ်အလင်းရရှိဖို့ဟာ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်ခြင်းမှ နိုးကြားလာစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလောကကြီးကို ပြောင်းလဲဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် စတင်ရပါ့မယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့သဘာဝကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် စတင်ရပါ့မယ်။
တစ်ဦးချင်းအလိုက်ရဲ့ အဓိကကျမှုနဲ့ တစ်ဦးချင်းအလိုဆန္ဒဟာ စက်မှုတည်ထောင်တဲ့ကမ္ဘာရဲ့ အရိပ်မှာ ထက်ညွှန်းကိန်းအရ ဆက်လက်ကြီးထွားလာတဲ့အခါ မေးခွန်းနှစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Timmerman က ပြောပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ မိမိအတ္တကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက် လူအများကို သူတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးများကို ဘယ်လိုများ ပိတ်ပင် ငြင်းပယ်နိုင်ပါ့မလဲ? ဒါပေမယ့် မရေမတွက်နိုင်တဲ့ လောဘကြီးမှုတွေ ၁၀-ဘီလျံအဆင့်မျှရှိနေတဲ့ ဂြိုဟ်တစ်ခုပေါ်မှာ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘယ်လို အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပါ့မလဲ?
ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ တကယ့်စိန်ခေါ်နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍများက ဖော်ပြတဲ့ (ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အတွေးများနဲ အပြုအမူများအတွက် ပြင်းထန်တဲ့ သမားရိုးကျမဟုတ်တဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းတစ်ခု) အချက် ဖြစ်ပါတယ်။
Timmermanက ငြင်းပယ်ပါတယ်။ ယနေ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ -
တစ်ဦးချင်းအလိုက်ရဲ့ သီးခြားလက္ခဏာမှ -, အများသုံး လူ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဖြင့် သူ့ရဲ့ချည်နှောင်ထားခြင်းမှ-
အကျွန်ုပ်တို့ကို အဝေးသို့ ယူတဲ့…….
ပြီးတော့ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ရန်မူသော ပျိုးထောင်လေ့ကျင့်ပေးမှုမှ ဘယ်လိုပြန်လည် ရပ်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့ -, အခြားနည်းလမ်း ရွေးချယ်စရာကို ဘယ်လိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ - အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နေရာများနှင့် အကျွန်ုပ်တို့ကို သတ်မှတ်ပြဌာန်းပေးတဲ့……
ပထ၀ီဝင်နိုင်ငံရေး ပညာနှင့်ပတ်သက်တဲ့အပြုအမူ တစ်ခု ဖြစ်တယ် - ဆိုတာ ထောက်ခံထားပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်တဲ့အရာပေါ်မှာ သတိကြီးစွာ တွေးခေါ်ယူဆခြင်းနဲ့ ကမ္မဌာန်းထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ အဲဒီရဲ့ နည်းလမ်းများဖြင့် ဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့နယ်ပယ်ဟာ -“အကြမ်းမဖက်တဲ့ အတွေးအခေါ်”- လို့ ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့အရာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Dalai Lamma က သူ့ရဲ့နိုဘယ်ဆုကို လက်ခံစဉ် ပြောကြားခဲ့တာကတော့…..အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပထ၀ီနိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာနားလည်ခံယူတတ်ခြင်းသာမဟုတ် စကြ၀ဠာဆိုင်ရာ တာဝန်ယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နားလည်ခံယူတတ်ခြင်းကို တိုးတက်ရပါ့မယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဂြိုလ်ကို ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံပေးတဲ့ ခြားနားတဲ့ပြဿနာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းပဲ နားလည်ခံယူတတ်ခြင်းကို တိုးတက်ရပါမယ်။ တာဝန်ယူခြင်းဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်များ၊ အထူးသီးသန့်အလုပ်ကို ပြုလုပ်ဖို့ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထား- ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားပြီးတဲ့ သူများအပေါ်မှာသာ တည်ရှိတာမဟုတ်ပါ။ အဲဒါဟာ အကျွန်ုပ်တို့ အသီးသီး တစ်ဦးချင်းအလိုက် အပေါ်မှာ တည်ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Wednesday, March 09, 2011